Alahady faha dimy karemy – 13/03/2016 : Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitoraka azy voalohany.
Tamin’izany andro izany i Jesoa dia nankany an-tendrombohitra Oliva, fa nony maraina koa vao niverina tany an-Tempoly Izy, ka nanatona Azy ny vahoaka rehetra, dia nipetraka nampianatra azy ireo Izy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin’ny mpanora-dalana sy ny Farisianina, ka narosony teo afovoany. Dia hoy izy tamin’i Jesoa: “Ry Mpampianatra, azo nijangajanga ity vehivavy ity. Ary i Môizy ao amin’ny lalàna dia nandidy antsika hitora-bato ny olona toy izany, fa Ianao kosa mba ahoana, hoy Ianao?” Izy no nanao izany dia ny hakany fanahy Azy, mba hisy hiampangany Azy. Fa i Jesoa kosa niondrika, dia nanoratra tamin’ny rantsan-tanany teo amin’ny tany. Ry zareo amin’izany tsy nitsahatra, fa mbola nanontany Azy ihany, ka nitraka Izy dia nanao taminy hoe: “Izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany”. Dia niondrika indray Izy ka nanoratra teo amin’ny tany. Fa ry zareo kosa nony nandre izany, dia nihatakataka tsirairay, ny zokinjokiny no lohalalana, ka i Jesoa irery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo afovoany. Izay vao nitraka i Jesoa, ka nanao taminy hoe: “Ravehivavy, aiza ry zareo niampanga anao teo? Moa tsy nisy nanameloka anao va?” Novaliany hoe: “Tsy nisy, Tompoko”. Dia hoy i Jesoa: “Izaho koa tsy hanameloka anao. Mandehana, ka aza manota intsony”.